ရွာထဲမှ ဂျီ အဟောင်းကိုင်သူများ၏ သနားဖွယ်ဖြစ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရွာထဲမှ ဂျီ အဟောင်းကိုင်သူများ၏ သနားဖွယ်ဖြစ်ရပ်
ရွာထဲမှ ဂျီ အဟောင်းကိုင်သူများ၏ သနားဖွယ်ဖြစ်ရပ်
Posted by သခင်သူရိန် on May 3, 2012 in Community & Society, Complaint / Claim, Environment, How To.., Ideas & Plans, Myanma News, Relationships & Family, Think Different | 11 comments
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ကျွန်တော့အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ဒီကနေ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်နှင့် သူ၏ ရင်တွင်း ခံစားချက်လေးကို ပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်… သူရဲ့ အဖြစ်က ဒီလိုပါ…
ဂျီ အဟောင်း (ယခင် FEC 1500 ပေးသွင်းသုံးရသော ဖုန်း) တစ်လုံး သူ့မှာ မပြစ်ရက် မရောင်းရက် ကိုင်တွယ်ထား၊ ဖက်တွယ်ထားလျှက်ရှိပါတယ်… ထို GSM ပိုင်ရှင်များသို့ မေလ တစ်ရက်နေ့နောက်ပိုင်း prepaid ကတ်စနစ် ပြောင်းသုံးမည်ဟု သတင်း ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိခဲ့ပါတယ်… ကြိုတင်သွင်းငွေဖြင့် သုံးစွဲလျှက်ရှိပါတယ်… တစ်ခါသွင်းလျှင် ၅ သောင်းမှ တစ်သိန်းအထိ မိမိလစဉ်သုံးစွဲသော ယူနစ်အလိုက် ကုန်ကျငွေ၏ သုံးလစာကို ဖြည့်တင်းရလေ့ရှိပါတယ်… တစ်လစာ၊ နှစ်လစာလောက် ကြိုတင်သွင်းခွင့် မရပါ… နောက် ကြိုတင်ငွေပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် မိမိဘာသာ မှတ်သားထားရလေ့ရှိပါသည်… SMS ရောက်မှ သွားရောက်သွင်းပါက လူများ အင်မတန်မှ များလှသည့်အပြင် အချိန်လည်း အင်မတန် ကုန်ပါသည်… လူအများနှင့် ငွေသွင်းကောင်တာများ မလုံလောက်တော့ပါ… ထို့ကြောင့် ဝိရိယ စိုက်ထုတ်ကာ မိမိအသိစိတ်ဓါတ်ဖြင့် သွားသွင်းထားပါက အချိန်မကုန် လူမပင်ပမ်းတော့ပါ… သို့ရာတွင် ဧပြီလ ၁၅ ရက်လောက်တွင် သူ့မှာ ပြသာနာ စပါတော့တယ်… သူ၏ အင်မတန်ကောင်းသော ဝိရိယကြောင့်ပါ…
ပထမအချက်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်အသိမိတ်ဆွေမှ အထက်ပါ prepaid card စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို ကြိုဆိုသည့်အပြင် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုပါမည်ဟု တစ်နည်းအားဖြင့် ဝင်လာသော အကြောင်းကြားစာအား yes လုပ်ထားပါတယ်… ထိုစနစ်မှာ နီးစပ်ရာဖုန်းဆိုင် (ဝါ) စတိုးဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ ဖြည့်တင်းနိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း တန်းစီကာ ငွေသွင်းခြင်း ကိစ္စမှ ကင်းလွှတ်တော့မည်က တစ်ကြောင်းကြောင့် ဟုတ်ကဲ့ သုံးစွဲပါမည်ဟု အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်…
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ထိုသို့အကြောင်းပြန်ထားသော်လည်း အောက်ပါစာသားများကိုတော့ ဧပြီလအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် (ဝါ) အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ပေးပို့ကာ ကြိုတင်ငွေသွင်းခြင်းကို ထပ်မံဖြည့်တင်းရန် တောင်းခံထားပါသည်။ အောက်ပါစာသားအားရူ့ပါရန်။
Please kindly requested to fill up advance amount (Ks)(OR ) oversea charges before(14 : 00 ) PM,27- April 2012. Thank you MPT.
အမှန်တွင် ဖြစ်ရမည်မှာ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကြိုတင်ငွေသွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပြီး ကြိုတင်ငွေသွင်းကတ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို့ ကြိုတင်ငွေများကို တစ်လစာ (သို့) လစဉ်ငွေဆောင်စေသော စနစ်သို့ပြောင်းလဲ ပေးဆောင်ပါရန် အကြောင်းကြားခြင်း (သို့) ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်လို့ ထို အမျိုးသမီးကြီးမှ ဖြစ်ချင်တာများကို ရင်ဖွင့်ပါတယ်… အခုတော့ ဧပြီလအတွင်း ထပ်မံကာ မိမိသုံးစွဲသော ဖုန်းအခွန်ငွေထက် သုံးလစာခန့်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးသော်လည်း ထိုငွေကြေးများအား ယူနစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ prepaid card အတွင်း ထည့်သွင်းပေးယုံဖြင့် အလွန်လေးစားဖွယ် ဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုဆိုမည်ဖြစ်ပါတယ်… ဒါမှမဟုတ် ကြိုတင်ကာ ယခုလို ဝိရိယ ရှိ့ရှိ့ ထည့်သွင်းထားသော သုံးစွဲသူများအား ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုအသစ်မှာ စတင်ပြောင်းခါစဖြစ်ပါသဖြင့် နောက်ဘယ်လမှာမှ ငွေများအား ကျန်ငွေသတ်မှတ်ကာ ယူနစ်အစားထိုး ထည့်သွင်းပေးပါမည်ဆိုသော စာသားမှာ အခုစာရေးနေချိန်အထိ ရောက်မလာသေးပါ… ပို့စေချင်ပါတယ်… ဖုန်းရုံးသို့ သွားရောက် စုံစမ်းကြည့်တော့မှ (၇)လ ပိုင်းလောက်မှ ပိုငွေ ကို ပိုရင်ပေါင်းပေးမယ်၊ လိုငွေကို လိုရင် နုတ်ပေးမယ် လို့ သိရပါတယ်… (သိုဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေမှာ ထပ်မံကာ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ် ၁ သောင်းတန်ကို ဝယ်ယူကာ လက်ရှိဖုန်းလေးအား အသက်ဆက်လိုက်ရပါကြောင်း နောက်ဆက်တွဲသတင်း)
Prepaid Card စနစ်သို့ ပြောင်းလဲ ငွေသွင်းခြင်း ကြော်ငြာတောင် ကွန်ပျူတာနှင့် မရိုက်နိုင်ဘဲ လက်ရေးမူကို ကော်ပီဆွဲထားခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တပ်သုတ်ရိုက်ကာ အလျှင်စလို လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း တွေ့ရှိ့ရပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်… ဒါပုံလေး မထည့်ပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ… အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းပြန်ကြားချက်ကို စာရေးပြီး ကပ်ထားပါကလည်း အကျိုးများနိုင်ပါတယ်.. အခုတော့ လူတန်းကြီးမှာ ဘယ်သူ့ကို မေးရမည်မသိဖြစ်နေပါတယ်လို့ သူ့ ခံစားချက်ကို ပြောပြပါတယ်…
ကြိုတင်ပေးငွေတော့ ကောက်ပါတယ် ကြိုတင်အကြောင်းကြားတာတော့ ငွေကောက်ဖို့ပါဘဲ… မြန်မာ့ပြည်၏ ပြည်သူများနှင့် ပေါင်းကူ ဆက်ဆံရေးကို ကြိုတင်တွေးဆထားခြင်း အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်… ‘ ဒီလိုတော့ ဒို့စမယ်’ ဌာနဆိုင်ရာများမှ လိုအပ်သည်များကို စဉ်းစားကာ ကြိုတင်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြသာနာများအား ကြိုတင်ရှင်းလင်းထားခြင်း၊ ပြသာနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက အစားထိုး ဖြည့်တင်းနိုင်အောင် စီမံထားခြင်း၊ သတင်းပြန်ကြားနိုင်သော ဌာနဆိုင်ရာ ဖုန်းနံပါတ်များ အလွယ်တကူဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်အောင် စီစဉ်ထားခြင်းများ လိုအပ်နေပါတယ်လို့ မြင်ပါတယ်…
ဒါလေးတွေ ပြီးရင်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါအကြောင်းအရာလေးက သေးသေးလေးတွေကို ပြင်ရအုံးမယ်ဆိုတာ အချက်အလက်အနေနဲ့ ထောက်ခံပါတယ်… ဖုန်းရုံးဌာနမှ ပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်သဖြင့် မိမိငွေကြေးလေး မဆုံးရူံးသွားကြောင်း၊ အခုတော့ ငွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားရသော်လည်း ၇ လ ပိုင်းခန့်တွင် ပြန်လည် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် မိတ်ဆွေ၏ငွေကြေးများ မဆုံးရူံးသွားပါကြောင်း၊ အခုဒီပြသာနာလေး ဖြစ်လာသော်လည်း၊ နောင်တွင် ဒါမျိုး ကြုံရတော့မည်မဟုတ် (ရုံးသို့ မသွားရတော့သဖြင့်) နှစ်သိမ့်လိုက်ရပါတော့သည် ခင်ဗျား။ ရွာထဲမှ သူကြီးဆီ တိုင်မည် ပြောသော်လည်း ဖုန်းဆက်မရသောကြောင့်၊ ကိုယ်သာလျှင် ပြေလည်အောင် ရှင်းပြပေးလိုက်ရပါတော့သည် ခင်ဗျား။။။
အင်းရေးထားတာနဲနဲမရှင်းဘူး။ ကျွန်မမှာလဲအဲလိုဖုန်းရှိပါတယ်။ စောကြီးကတဲက prepaid card စနစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို လက်ခံမယ်လို့လဲ yes လုပ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ မေ ၁ မှာစမယ်လို့ သိထားတဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံကို ဧပြီလဆန်းမှာ တလစာပဲကြိုသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူကလဲပြောထားတယ်လေ။
နောက်နှစ်လနေ မှ ဖုန်းပြောခတွေဧပြီထိရှင်းပြီးမှ လက်ကျန်ငွေကိုပေါင်းထည့်ပေးမယ်ဆိုတာအစောကြီး ကတဲကပြောပြီးသားပါ။ မသိလိုက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မေ ၁ ကျ တော့ ၁၀၀၀၀ ကျပ်တန် ကဒ်ဝယ်ထဲ့ လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ မက်ဆေ့ပို့တယ်ဆိုတာသူ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပို့တာမို့ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်ချိန် လုပ်လိုက်ရင်ရတယ်လို့ထင်တာပဲ။ အဲဒါဘာပြသနာများပါလိမ့်။ ကျွန်မတော့သိပ် မရှင်းလို့ ပါ။အ စောကြီးက တဲကတစာစာပြောထားပြီးသားပဲမဟုတ်လား။ သူကငွေသွင်းပါလို့စာပို့တိုင်းသွင်းစရာမှ မလိုတာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွင်းမှဖြစ်တာပဲမဟုတ်လား။ နောက်ပြီးသူကငွေဖြည့်ကဒ်မသွင်းသေး တဲ့သူတွေ ကို ၁၀၀၀ ထဲ့ပေးထားပါတယ်။ ငွေဖြည့်ကဒ်ထဲ့မှ အဲဒီ ၁၀၀၀ နှုတ်ပါတယ်။ အစောကြီးကတဲကကြေငြာ ထားပါတယ်။
အေးဗျ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တွေ့ကြုံချင်လို့ သွားကြည့်တော့ ဟုတ်တယ်ဗျ မသိသေးတဲ့သူတွေ အများကြီးဘဲ လာပြီး စုံစမ်းနေကြတာ… ဘယ်မှာ ကြေငြာသလဲတော့ မသိ… သိသူများ လင့်ဒ်လေး ပေးကြပါ ပြန်ရှယ်ပေးကြပါဗျာ.. လူတွေ အချိန်ကုန်လွန်းလို့ပါ…
၁) ကြိုတင်ငွေသွားသွင်းသည့်အချိန်တွင် အခုလို ရှင်းပြပေးခြင်း မရှိခဲ့ပါ…
၂) ဖုန်းသို့ မတ်စိခ်ျ ပို့ကာ အကြောင်းမကြားခဲ့ပါ… (ကျွန်တော့မိတ်ဆွေဖုန်းကိုပြောပါတယ်)
ဂျာနယ်တွေမှာတောက်လျောက်ပါနေတာပဲ။ ကြာလှပါပြီ။ ဒီအစီအစဉ်စမယ်ဆိုကတဲက ဂျာနယ်တွေမှာအမြဲလိုလိုပါနေလို့ကျွန်မလဲသိတာပါ။ အင်တာဗျူးတွေမှာပြောပြောနေတာပဲ။ သူတို့ပါတာတွေကိုကောက်သင်းကောက်စု လိုက်ရင်းကနေ data တွေစုံသွားတာပါ။ နောက် သူတို့ က ဖုန်းနံပါတ်ကိုမက်ဆေ့ပို့ထားတယ်လေ။ မသိတာရှိရင်မေးပါဆိုပြီး။ Billboard လဲထောင်ထားပါတယ်။ ၁၈၂၄ လားမေ့သွားပြီ။ အဲလို၁၈ နဲ့စတဲ့ ဂဏန်းလေးလုံးလေ မေးပါဆိုပြီး။ အဲကိုဖုန်းဆက်မေးလဲရပါတယ်။ ၃၀ ရက်နေ့မှာပြောင်းချင် တဲ့သူမသိတဲ့သူဒီဖုန်းဆက်ပါ ဆိုပြီးတော့ မက်ဆေ့ပို့တယ်လေ။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ april လ လယ်လောက်မှာ ငွေကုန်နေလို. ကြိုတင်ငွေ ထပ်ဖြည်.မိခဲ.တာ။ may လ(၁) ရက်နေ.က စပြီး prepaid system ပြောင်းသွားရင်လဲ ပိုငွေကို ဆက်ပြီး carry လုပ်သွားမယ်ပဲ သိထားတာကိုး။ (၁) ရက်နေ. ရောက်တော. ဖုန်းကအ၀င်ပဲ ရတော.တယ်။ call center (1876) ကိုစုံစမ်း ကြည်.တော.လဲ အတိအကျ တော. မသိရဘူး။ *124# ကိုခေါ်ပြီး balance စစ်ကြည်.တော. ၄ ကျပ်ပဲကျန်တော.တယ်။ ငွေကျန်သေးတာတော. သေချာတယ်။ ပို သွင်းထားတာကိုး။ ဘယ်ကိုမေးရမှန်း မသိတာနဲ. Card ၀ယ်ဖြည်.လိုက်ရတယ်။ ဒီ post ဖတ်မိမှ သိတော.တယ်။ တော်သေးတာပေါ.၊ နောက်ပြန်ဖြည်.ပေးမယ်ဆိုတော.။
ရဲဘော်သူရိန် ရေ ၊ ကြုံလို့ ကျုပ်ကိုယ်တွေံလေးလဲ ပြောပြချင်သဗျား ။ ၃လပိုင်း ၁ ရက်နေ့ က စတယ် ထင်တယ် ။ ကဒ်စနစ် ပြောင်းလိုက်တာ ။ ကဒ်စနစ်ပြောင်းပြီးကတဲကဗျာ.. ရှောကနဲ ရှောကနဲ နဲ့ အခုဒီကွန်မင့်ပေးတဲ့အချိန်ထိ ၁၁ ကဒ် ဖြည့်ခဲ့ပြီးပြီ ။ အစက ကဒ်စနစ်ပြောင်းပြီဆိုတော့ ၊ အခု၂သိန်းကျော်ဘဲတန်(ယခင်၅သိန်းတန်) စီဒီအမ်အေ ဖုန်းတွေလို ၊ စက္ကန့် အတိအကျ နဲ့ ငွေဖြတ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာ ။ ၁၀ကဒ်လောက်ကုန်မှ ကျုပ်အဖြစ် ကို ကျုပ် အံ့အားသင့်ပြီး ၊ ကဒ်စနစ်ပြောင်း အသိမိတ်ဆွေများကို လိုက်မေးကြည့်တော့လဲ ၊ သူတို့ လဲ ကဒ်တွေ ခဏလေးနဲ့ ကုန်ကုန်သွားတာ ကို သတိထားမိကြတယ် လို့ ပြောကြတယ်ဗျာ ။ ကဒ်ခဏလေးနဲ့ ကုန်တာ ဖုန်းပြောလွန်းလို့ ဆိုရင် လက်ခံပေမယ့် ၊ ကျုပ်တို့ ဘာသာ ပြန်စစ်ကြည့်တော့ တစ်ရက်မှ အလွန်ဆုံးပြော မိနစ် ၂၀၊ တစ်ချို့ ရက်တွေ မိနစ်၂၀ မပြည့် ၊ တစ်မိနစ် ၅၀ကျပ် နဲ့ တစ်ရက် ၁၀၀၀ ကျပ် ဘဲ ဖြတ်တယ် ထားဦး ၊ တစ်လ ကုန်လှ သုံးသောင်းကျပ်ပေါ့ ။ အခုတော့ ၊ ၃ လပိုင်းကနေ ၅ လပိုင်း ၁ရက်နေ့ လောက်အထိ ကို ငွေဖြည့်ကဒ် ၁၁ ကဒ် ဖြည့်လိုက်ရတာဆိုတော့ ၊ ငွေဖြည့်ကဒ် ထုတ်တဲ့ ကုမ်ပဏီမှာဘဲ မှားနေလား ၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှာဘဲ အမှား ရှိနေလား ၊ သို့ လော… သို့ လော နဲ့အဖြေ ရှာလို့ မရပါကြောင်း ။
အဲ့ တစ်ချက် ပြန်စစ် ဖို့ ခက်သွားမယ် လို့ထင်ခဲ့ပါကြောင်း .. နဲ့ ထင်သလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း …
အဲဒါက သတင်းစာကကြေညာရမှာလေ အစိုးရလုပ်စားသူတွေရဲ့…..
ပြည်သူတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ့်ကိစ္စကိုမှ သတင်းစာမှာမထည့်ပေး-မကြေညာပေးရင် သတင်းစာက ဘာသွားလုပ်ဘို့တုန်း….။
ဆက်သွယ်ရေးကလုပ်လိုက်ရင် တလွဲကြည့်ပဲ။ တစ်ခါမှ သူများ အပြောအဆိုလွတ်တယ်မရှိဘူး၊
တချို့ဖုန်းတွေထဲ မက်ဆေ့ ခ်ျ မရောက်ဘူး။တခုခုဆိုရင်လည်း အများပြည်သူသိအောင် သက်ဆိုင်ရာရုံးတွေမှာ တရားဝင်ကြော်ငြာ ကပ်မထားဖူး၊ ဂျာနယ်တွေက တဆင့် ဟုတ်သလို၊မဟုတ်သလိုပြောတယ်။ ပြောလိုက်ပြီးဖြစ်မလာတာတွေလည်းအများကြီးပဲ။ စိတ်ကုန်တယ်။
ကျွန်ုပ်ဘဝတွင် ပထမဆုံး အစိုးရကိုငွေမပေးပဲရတဲ့
Service နောက်မှတိုးရင်းပေါင်းဆိုလဲ ပေးရမှာပေါ့လေ
သေချာတယ် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေဖုန်းထဲ ဝင်တဲ့ မက်စိတွေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စီစစ်ပြီးပြီ..
သူတို့ ကြိုတင်ငွေသွင်းဖို့ sms ပို့တာ ၇ ရက်နေ့၊ ဧပြီ… ပထမအကြိမ်
နောက်ထပ် ထပ်မံပြီး သတိပေးစာပို့တာ ၂၄ ရက်နေ့…. ဒုတိယအကြိမ်
ကတ်ဒ် စနစ်ပြောင်းဖို့ အသိပေးတာ ၂၆ ရက်နေ့၊ ဧပြီ …
နောက်ထပ် သတင်းပေးတာ ၂၈ ရက်နေ့၊ ဧပြီ…
နောက်ထပ်ထပ်ရောက်တာ ၃၀ ရက်နေ့၊ဧပြီ…
ဝိရိယအရမ်းရှိတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေက ၂၅ ရက်နေ့မှာ သွားသွင်းတာပါ… သုံးလစာ
ဒုတိယအကြိမ်ဆိုတော့ သူလည်း ဖုန်းပိတ်သွားမှာ ကြောက်တာပေါ့… အလုပ်နဲ့ကိုး… ဘာတွေလွဲနေလဲ?
ဆက်သွယ်ရေးက လူတွေ အလုပ်လုပ်တာ မရှင်းမရှင်းနဲ့မို့..
သူတို့နဲ့ မလွဲမရှောင်သာ ဆက်စပ်နေကြရတဲ့ ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ ခမျာတွေမှာလဲ.
အမြဲ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေကြရတာနဲ့တူပါတယ်ဗျာ…။